Bakhala ngokusebenza komtholampilo eSobantu | News24
LAST UPDATED: 2018-11-19, 15:59
Bakhala ngokusebenza komtholampilo eSobantu
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaUmtholampilo waseSobantu umphakathi okhala ngendlela osebenza ngayo.
AMALUNGU omphakathi asebenzisa umtholampilo waseSobantu athi asesaba ngisho ukuya kulo mtholampilo ngoba kufana nokudlala ngesikhathi, njengoba baze bagoduke bengasizakalanga.
Lo mphakathi uthi uma uye kulo mtholampilo kumele uzitshele ukuthi usuku lwakho lonke uzoluchitha khona ushikisha amabhentshi ngenxa yokuhamba kancane komsebenzi.
Bakhala ngabahlengikazi abanganele nanokuthi laba abakhona bazithathela isikhathi sabo babuye bangawenzi umsebenzi.
UNks Nana Mkhize uthe uma edinga ukuya kulo mtholampilo kuphoqeleka ukuba acele usuku emsebenzini uma esebenza ngoba usuke ezohlala usuku lonke emtholampilo.
“Ngisho ungavuka kanjani ufike ekuseni ngovivi ekugcineni uzochitha usuku lonke uhleli emabhentshini ngenxa yokuhamba kancane komsebenzi nokugcina sekuholela ekutheni kube khona olayini abade. Ukuhamba kancane komsebenzi akudalwa ubuningi babantu abaya emtholampilo kodwa kudalwa indlela ekusetshenzwa ngayo. Uma ujahile nje uze uphoqeleke ukuthi ushiye phansi uhambe,” kubeka lona.
USphumelele Majozi uthe : “Uhlala usuku lonke kulowa mtholampilo kwesinye isikhathi kusebenza abahlengikazi ababili kuphela nabo abazenzela kancane kodwa bebe bewubona ulayini ukuthi mude nabantu belibele befikile kuze kugcwale.
“Sikhathele manje indlela ekusetshenzwa ngayo kumele uMnyango wezeMpilo ufike kungazelele muntu nje kulo mtholampilo khona uzozibonela wona ukuthi kusetshenzwa kanjani.
“Uma ugula ngempela udinga usizo akuwona nje umtholampilo okumele uye kuwona ngoba ungashonela khona usahleli emabhentshini.”
UNkk Elizabeth Ngcobo uthe :
“Mina mtanami uma nje ngicabanga indaba yokuthi kumele ngiye kulo mtholampilo inhliziyo yami ivele ishone phansi ngoba ngiyazi ngizobuya sengiphuke umoya ngicasulwa indlela ekusetshenzwa ngayo.
“Angikaze ngiyibone into enje abahlengikazi bakhona ngathi abanandaba nje nomphakathi abawusebenzelayo indlela abenza ngayo,” kubeka yena.
Lo mphakathi uphinde wadalula ukuthi uma befika bezobhalisa bagcina sebesizwa umuntu ogunda utshani kube uyena obakhiphela amakhadi abo.
Imizamo yokuthola okhulumela uMnyango wezeMpilo uMnuz Agiza Hlongwane ibhuntshile njengoba kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engakayiphenduli imibuzo athunyelelwe yona.
LIVE: Denel chair Mantsha launched 'extraordinarily belligerent attacks' on him, says Gordhan #StateCaptureInquiry